चोटपटक बच्चाहरु र वयस्क, पुरुष र महिला छन्। महिला सबैभन्दा रूपमा चाँडै र कुशलतापूर्वक सकेसम्म एक चोट हटाउन कसरी प्रश्न रुचि राख्नुहुन्छ। तिनीहरूले एक नरम छाला र पातलो र पारगम्य रक्त नली महिला हर्मोन कारण छ। चोट क्षति को क्षेत्र मा आफ्नो उपस्थिति, सुनिंनु र पीडा मनपरेको।
रक्त नली को चोट पर्खालहरु को समयमा नष्ट गर्दै छन्, र रगत छाला अन्तर्गत पोखे। यो नीलो-बैंगनी स्थलहरू, अन्ततः पहेंलो-हरियो आफ्नो रंग परिवर्तन जो देखिन्छ। बढ्छ सुनिंनु र पीडा जो बिस्तारै प्रत्येक पारित दिन संग घट्छ, देखिन्छन्।
शरीर को विभिन्न भागहरु मा hematomas को Resorption फरक ठाँउ लिन्छ। Bruising आघात खुट्टा, एक महिना सम्म विद्यमान शरीर र हात मा - दुई हप्ता सम्म, र एक हप्ता भित्र गायब अनुहार मा। के मामलाहरु तल्लो चरम, अधिक उच्चारण को उपचर्म ऊतक र थप रक्त नली छ कि तल माथि देखि शिरापरक रक्त चाल, कि कारक हो।
चाँडै उनको अनुहार र शरीर मा एक चोट हटाउन, त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन्:
चिसो उपचार। चोट को पहिलो मिनेटमा उत्तम कुरा चोट चिसो वस्तु को साइट कहिले लागू गरियो। यो एक तौलिया, बरफ वा चिसो पानी बोतल मानव शरीर मार्फत नैपकिन संलग्न मा र्याप फ्रिज कुनै पनि प्याकेज, हुन सक्छ। यो खुट्टा जुटाउने मनमोहक छ, र अनुहार र हात चिसो पानी चलिरहेको अन्तर्गत cooled गर्न सकिन्छ। चिसो गर्न जोखिम को अवधि शीतदंश वा hypothermia प्रकुपित छैन, 15 मिनेट भन्दा बढी हुँदैन। को पहिले चिसो लागू, कम उच्चारण चोट, edema र दुखाइ को आकार छ;
गर्मी उपचार। एक दिन पछि न्यानो चोटपटक लागू गर्न उपयोगी, तर तातो पानी बोतल हुन, गरम नुन, आधा घण्टा प्रति दिन तीन पटक सिरका को समाधान गर्न भिजेको compresses भरिएको बैग। यो क्षतिग्रस्त क्षेत्रको पोषण र उपचर्म रक्तस्राव को resorption सुधार, को भास्कुलर पर्खाल नयाँ कक्षहरूको गठन गर्न मद्दत गर्नेछ। राति, आयोडिन ग्रिड धेरै उपयोगी कि न्यानो, कम सुनिंनु, क्षय उत्पादनहरु ल्याउन र रगत प्रवाह सुधार;
सधैं फार्मेसी मा शीघ्र रूपमा चाँडै विशेष nanodiamonds उपयोग गरदै र gels संग चोट हटाउन (Balsam "Lifeguard" जेल "Sinyak- बन्द", "को मुसीबत" तर concoctions संग बाम-क्रीम)। मात्र ती gels र क्रीम राम्रो प्रभाव प्राप्त गर्न हरेक दुई घण्टा प्रयोग गर्नुपर्छ;
लोक उपचार bruising, गंभीर दुखाइ राहत र सुनिंनु को कमी कम गर्न पहिलो मिनेट देखि लागू गर्न सकिन्छ। grated प्याज (1 प्याज) र नुन (1 Tbsp। एल) एक gauze झोला मा पैक चोटपटक को तीव्र निको बढाउँछ।
गोभी पात र plantain, बन्द भान्सा compresses को रूप मा, बोट बाट रस प्राप्त गर्न एक हथौडा संग लड्न आवश्यक छन् जो hematoma को क्षेत्र मा एक घण्टा लागू हुन्छ।
हर्बल Rosemary (1 घंटा। एल), Coltsfoot (1/2 V। एल) जबसम्म यो पूर्ण cooled छ तातो चोट को क्षेत्र मा लागू गरियो पानी, उम्लिरहेको को कप compresses। सकारात्मक प्रभाव wormwood (3 Tbsp। एल) को तातो लोशन दिइएको छ, स्टेटजोन्स wort (2 Tbsp। एल) अनि हप (1 Tbsp। एल)। यो मिश्रण गर्न घाँस केही चमचा उम्लिरहेको पानी, फिल्टर, moistened पोंछे र तातो सनी कपडा को 0.5 लिटर धक्का घाइते को साइटहरु लागू गरिएको छ।
हरेक महिला चाँडै अनुहार मा चोट हटाउन कसरी थाहा उपयोगी छ। आँखा अन्तर्गत गाढा सर्कल, को गाल गर्न bruising, inconspicuous गर्न सकिन्छ भने2चमचा को समाधान मा भिजेको कपडा। एल। स्याउ साइडर सिरका, आयोडिन को4घटेको र2घन्टा। एल नुन। दुई दिन भित्र hematoma अवशोषित र बल्लतल्ल सजिलै देखिने हुन्छ छ। एक मात्र आँखा सम्पर्क समाधान जोगिन होसियार हुनुपर्छ। र तपाईं को एक हट भिजेको झोला प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ सन बीउ।
राति तपाईं मह संग रस र चुकंदर मज्जा को compresses बनाउन आवश्यक छ। मात्र यसलाई शीर्ष बन्दागोभी पात बनाउन र र्याप गर्न आवश्यक छ। सजिलै देखिने प्रभाव धेरै उपचार पछि आउँछ।
सानो चोटपटक र contusions ताजा पनीर, स्टार्च वा गेरानियम पात उपचार।
डाक्टर सधैं अस्पतालमा सही दबाइ चयन गर्न मदत गर्नेछ र तिमीहरूलाई भन्नेछु कसरी द्रुत चोट हटाउन घरमा, यदि चोट छैन गम्भीर छ।
घाइते आघात अनिवार्य परामर्श भने यदि संयुक्त मा चोटपटक गंभीर दुखाइ र कठोरता बाहेक फिक्री रोगी। तुरून्त भंग निकाल्न एक एक्स-रे गर्न आवश्यक छ। वा विशिष्ट कारण बिना सर्जरी पछि देखा कि चोटपटक पनि होसियार मेडिकल परीक्षा चाहिन्छ।
यो द्रुत चोट हटाउन कसरी मात्र थाहा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, तर कम अरूको ध्यान आकर्षित छ भविष्यमा hematoma गर्न गर्नुपर्छ। निवारक मर्मतका कसरी सञ्चालन गर्ने? रक्त नली को fragility कम र रक्त सुधार गर्न को भिटामिन सी र K. पर्याप्त रकम प्राप्त गर्न आवश्यक छ
यो क्रीम, जसमा संरचना यी भिटामिन समावेश, खान फल र तरकारी प्रयोग गर्न सकिन्छ लागि, एक Multivitamin ट्याब्लेटको प्रयोग गर्नुहोस्। र एकै समयमा तरल प्रशस्त पिउन भूल छैन।
कति छिटो घर मा परेलाहरु बढ्न: सुझाव, चाल,
तपाईंको अनुहार कसरी सिद्ध छ भनेर
Biorevitalization तपाईं कति प्रक्रियाहरु के गर्न आवश्यक? समीक्षा, फोटो अघि र पछि
राजा Sophocles 'Oedipus ": एक सारांश। "Oedipus Rex": समस्या, वर्ण, episodiyam एक रूपरेखा
उपचार क्रीम 'Elidel': प्रयोगको लागि समीक्षा र निर्देशन
Hemolytic-uremic सिंड्रोम र यसको उपचार संग सम्बन्धित साइन्स
इन्टरनेटमा तपाईको व्यक्तिगत डेटा कसरी सुरक्षित राख्नुहुन्छ
धकेल्नेबटन आईफोन: विवरण र विशेषताहरु
खेल "माफिया 2" सिस्टम आवश्यकताहरु
जलजीवालय माछा: शीर्षक, वर्णन र सामग्री